Rosia: Nahazo ny loka Runet ny “Help Map” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2018 11:44 GMT
(Marihina fa tamin'ny 3 Desambra 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Miarahaba an'i Grisha Asmolov sy Alexey Sidorenko avy ao amin'ny tetikasa RuNet Echo Global Voice aho noho ny nahazoany ny Loka RuNet ho an'ny tetikasan'izy ireo “Help Map” (Russian-fires.ru). Mahafinaritra ny mitatitra fa nahazo ny loka lehibe indrindra amin'ny aterineto Rosiana ireo mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV. Mbola mahaliana kokoa, nandresy izany tao amin'ny sokajy “Fanjakana sy Fiarahamonina” i Grisha sy Alexey, izay fandresena ny andiana karazana loka lehibe maro hafa.
Ny ekipan'ny Russian Fires nandray ny loka Runet 2010. Saripikan'i Gregory Asmolov, lisansa Creative Commons.
Tetikasa ho fanangonam-baovao ifarimbonana an-tsarintany momba ny doro-ala mbola tsy nisy toa izany tany ivelan'i Moskoa tamin'ny lohataona 2010 ny “Help Map”. Vetivety dia lasa toerana manan-danja ho an'ny mpirotsaka an-tsitrapo ny tetikasa mba hanomezana loharanom-baovao ary hanoloran-tanana nandritra ny herinandron'ny krizy. Hita ao amin'ny fandrakofana manokana ny Doro-ala Rosiana 2010 ao amin'ny Global Voices 2010 ireo lahatsoratra ao amin'ny Global Voices izay nandrakotra ny “Help Map” , nanomboka tamin'ny volana Aogositra-Septambra 2010.
Pikantsary tao amin'ny russianfires.ru
“Help Map” no ampiasana voalohany ny sehatra Ushahidi tao Rosia ary iray tamin'ireo nahomby indrindra tamin'ny tantaran'i Ushahidi. Niaraka tamin'ireo foibe fandrindrana fanampiana hafa, ohatra nanome aingam-panahy ny fikatrohana antserasera izay nanome ny fanovàna ivelan'ny aterineto ny “Help Map”. Nampiseho ihany koa izany fa hirotsaka amin'ny fandraisana anjaran'olom-pirenena rehefa misy ny fotoana hanaovana izany ny olom-pirenena Rosiana- hevitra iray izay mifanohitra amin'ny fomba fahitan'ny vahoaka mahazatra ny fandraisana andraikitra sivika Rosiana izay mpiahiahy sy tsy te-hanao na inona na inona. Araka ny voalazan'i Gregory Asmolov :
Tsy voafetra tamin'ny fanampiana ireo niharamboina tamin'ny doro-ala ny hetsiky ny vondrom-piarahamonina Rosiana tamin'ny aterineto. Nanangana ny ekipan'ny mpamonjy voina mpilatsaka an-tsitrapo ireo bilaogera, nandeha tany an-toerana ary nanome fanampiana avy hatrany. Ankoatra ny torolàlana feno amin'ny fomba famonjena voina, ny fomba hiadiana amin'ny karazana voina isankarazany, ary ny momba ny fitaovana tokony ilain'ny mpilatsaka an-tsitrapo dia nanome sehatra fiaraha-miasa ao anatin'ny 24 ora ny aterineto sy ny fifanakalozam-baovao momba ny mety ho fiovan'ny toe-draharaha ao anatin'ny fotoana fohy.
Naneho hevitra momba ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena Rosiana ihany koa i Patrick Meier tao amin'ny bilaogy Ushahidi :
Nanaporofo ny “Help Map” fa tsy mpihaino fotsiny ny tambajotra-piarahamonina Rosiana, fa manana ekipa mavitrika miaraka amin'ny andraikitra ara-tsosialy avo lenta… Porofo tsy mbola fahita teo aloha ny fandraisana anjara tamin'ny “Help Map” sy ny zava-bita . Izany no fotoana voalohany nankatoavana ny loka Rosiana lehibe indrindra ho an'ny fampitam-baovao vaovao izay tohanan'ny fanjakana fa manan-danja tokoa ny vondrom-piarahamonina antserasera noho ny fikambanana isan'ambaratonga nentim-paharazana.
Tohanan'ny Sampan-draharaha Federaly Rosiana Mampiasa ny Haino Aman-jery ny “Loka Runet “. Ity no loka nasionaly nomena ho an'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny aterineto Rosiana ary fantatra amin'ny anarana hoe ” Oscar Internet” ao Rosia. Nalefa tao amin'ny fahitalavi-panjakana Rosiana ny lanonana tamin'ny fanolorana ny Loka Runet , ary azo jerena antserasera ao amin'ny fantsom-baovao Rosiana Vesti. Arahabaina i Grisha sy i Alex!
15 Desambra 2020Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana